Turkiga oo Giriiga kala heshiiyey soocelinta diyaarad iyo ciidan lagoostay. – Radio Daljir
Turkiga oo Giriiga kala heshiiyey soocelinta diyaarad iyo ciidan lagoostay.
Luulyo 16, 2016 11:37 g 0
Alexandroupolis, July 17 2016- Dawladda Giriiga ayaa sheegtay inay xirtay sideed askari oo dalkeeda ku soo gashay diyaarad millatari oo ah kuwa qumaatiga u kaca ah, taasoo ku soo dagtay magaalada Alexandroupolis oo ku taalla waqooyiga dalkaas, iyagoo codsaday magangalyo siyaasadeed.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegay in dawladdiisu ay waydiisatay in loo soo celiyo askartaan lagana aqbalay, waxaana ay mari doonaan halka ay maraan ciidamadii kale ee laqabtay.
DHEGEYSO-Barnaamijkii Saaka iyo Dunida Xarunta Galkacyo 17 07 2016.